Iindaba -Uyithambisa njani ikhonkco lokuhambisa ubushushu obuphezulu
Kubantu abaninzi ababandakanyeka kwimveliso yezemveliso, iimveliso zetyathanga lezothutho aziqhelekanga. Njengophawu olubalulekileyo lwemveliso ezenzekelayo, indima yayo ayinakubuyiselwa
Phantsi kweemeko ezinobushushu obuphezulu, ikhonkco lezothutho lihlala linengxaki yokunxiba, ukubola, ingxolo yokwandiswa kwetyathanga, kunye nokuvuza kweoyile. Iingxaki eziqhelekileyo zetyathanga lezothutho
(1) Umxokelelwane awuthanjiswanga, nto leyo ekhokelela ekubeni ikhonkco lihlale likwisimo esomileyo sokugaya, kwaye ingxolo inkulu
(2) I-pin shaft chain inxitywe kakhulu, kwaye ikhonkco liyolula kwaye liba lide kune-1000mm;
(3) Umxokelelwane umbi kakhulu, kwaye i-slag ye-rust iwela phezu kwemveliso, echaphazela umgangatho wemveliso
(4) Kwisiqendu sokuqala sokusebenza kwezixhobo, ioyile yesiqhelo yesinyithi yayisetyenziselwa ukuthambisa, kwaye kwenzeka ukuvuza okukhulu. Iimfuneko zokuthambisa kwimixokelelwane yezothutho
(5) Ukusebenza kweoyile elungileyo kuqiniswe kwintengiso yangaphakathi nangaphandle kwitsheyini, ukuze ingalahlwa ngamandla e-centrifugal yetyathanga, okanye icinezelwe ngumthwalo ukuze ihlukane nendawo yokukhuhlana.
(6) Ubuchule bokungena okungcono bunokungena kuwo onke amakhonkco okobunzima kwikhonkco lekhonkco ukwenza ifilimu yomda kunye nokunciphisa ukunxiba
(7) anti-igcwala elungileyo kunye nokusebenza uzinzo. Xa unxibelelana nomoya ngexesha lokusebenza, akukho oxides ziya kwenziwa.
Lubrication indlela yothutho
(1) ukuthambisa ajikeleze rhoqo Manual: sebenzisa itoti yeoli okanye ibhrashi oyile, kwaye ngenaliti oyile kanye shift nganye. Ukulungele isantya esisezantsi se-v≤4m / s
(2) Ukuthambisa ukuthambisa ioyile: Sebenzisa ikomityi yeoyile okanye ioyile yokudlulisa umbhobho weoyile kwisithuba esiphakathi kwamacwecwe angaphakathi nangaphandle eetyathanga elijikelezileyo, kunye nodriphu ama-5-20 amathontsi eoyile yokuthambisa ngomzuzu. Ukulungele ukuhanjiswa nge-v≤10m / s.